Home » About us » Tsindrio ny Notes » Gravis ton sommet avy any Toulouse sy ny fanentanany hiova
18 / 06 / 2019 13 / 06 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny tetikasan'ny Hafatr'i Silo mitambatra "Gravis ton sommet" ao amin'ny Toulouse, dia fomba fiasa izay tafiditra ao anatin'ny volana martsa faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatsiarovana.
En ny tranonkala de Gravis Ton Sommet avy any Toulouse, azontsika jerena ny fanazavana nomen'ity vondrona "messenger" ity. Ao izy ireo dia manazava ny "fampielezankevitra ho an'ny fiovana lehibe sy tena ilaina eo amin'ny tenantsika sy izao tontolo izao."
Ireo mpampita ny tsy-herisetra, izay mihevitra fa tafiditra ao amin'ny Diabe II ho an'ny Fandriam-pahalemana sy ny tsy Fahampiana. Izany no fomba hanazavana azy ireo:
Avereno ny fetranao, miakara eny ambony ary mangataha fiovana lalina sy ilaina.
Ny mahaliana antsika dia ny mametraka tolo-kevitra ho an'ireo izay maniry mihoatra ny fetrany amin'ny fiakarana mankany amin'ny tampony. Avelao hanao izany amin'ny dikany ara-panahy izy ireo ary mangataka fiovana lehibe sy manan-danja eto amin'izao tontolo izao.
"Ho an'ny firenena olombelona manontolo"
Gravis ton sommet de Toulouse, dia mampiroborobo ny fanentanana ho fiovana lalina sy manan-danja amin'ny tenantsika sy manerana izao tontolo izao
Vondrona iraka ao Toulouse, izay tia ny tendrombohitra sy ny natiora. Nanapa-kevitra izy ireo fa hanao fanentanana ho an'ny fiovana lehibe sy manan-danja eran'izao tontolo izao.
Izany dia te-hihanika ireo toeram-pivarotana samihafa any amin'ireo kontinanta samihafa amin'ny planeta:
Ireo no tendrombohitra izay manana dikany lalina sy ara-panahy ho an'ny vondrona Gravis ton sommet ao Toulouse.
Farany, ny tsy hametra-pialany amin'izao fotoana izao, dia hametraka sainam-panohanana marika sy marika saina amin'ny hoavy.